Oge nke ụgbọ ibu azụmahịa Smart | Duoduo
Oge nke ụgbọ ibu azụmahịa
Site na mmepe nke teknụzụ ọgụgụ isi na mgbanwe ọhụrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa, ọtụtụ ụlọ ọrụ amalitela ịzụlite ma ọ bụ jiri ụgbọ ibu azụmahịa. Agbanyeghị na ịzụ ahịa ịzụ ahịa nwere ọtụtụ uru ngwa, ọ dịkwa mkpa ị paya ntị na nzuzo na nsogbu ndị ọzọ.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, teknụzụ ozi ọhụụ ọhụụ dị ka ọgụgụ isi na Intanet nke Ihe amalitela ngwa ngwa, na usoro akụ na ụba ọhụụ dịka azụmahịa e-commerce na-eto eto, na-eme mgbanwe mgbanwe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ugbu a, iji soro mgbanwe ọhụrụ dị n'ahịa ma nye ndị ahịa ọrụ ka mma, ọtụtụ ụlọ ọrụ amalitela iji mmụta miri emi, biometrics, ọhụụ igwe, ihe mmetụta na teknụzụ ndị ọzọ iji mepụta ụgbọ ala ịzụ ahịa dị mma.
Walmart Smart ppingzụ ahịa
Dịka nnukwu ụlọ ahịa zuru ụwa ọnụ, Wal-Mart na-etinye oke mkpa iji kwalite nkwalite ọrụ site na teknụzụ. Na mbụ, Walmart tinyere akwụkwọ maka patenti maka ụgbọ ahịa ịzụ ahịa amamịghe. Dabere na patent ahụ, Walmart Smart Shopping Cart nwere ike inyocha obi obi onye ahịa yana ọnọdụ ahụ ya na oge, yana ike ijide obe nke ịzụ ahịa, oge ijigharị gara aga, yana ọbụlagodi ụgbọ ibu azụmahịa.
Wal-Mart kwenyere na ozugbo ejiri smart ịzụ ahịa ịzụ ahịa mee ihe, ọ ga-ewetara ndị ahịa ahụmịhe ọrụ ka mma. Dịka ọmụmaatụ, dabere na ozi nzaghachi sitere na ụgbọ ala ịzụ ahịa smart, Wal-Mart nwere ike izipu ndị ọrụ iji nyere ndị agadi aka ma ọ bụ ndị ọrịa nwere ike nwee nsogbu. Tụkwasị na nke a, enwere ike jikọta ụgbọ ibu azụmahịa na APP nwere ọgụgụ isi iji soro calorie oriri na data ahụike ndị ọzọ.
Ka ọ dị ugbu a, ụgbọ ibu azụmahịa nke Volvo ka dị na ọkwa patent. Ọ bụrụ na ọ banye n'ahịa n'ọdịnihu, a na-atụ anya na ọ ga-eweta ụfọdụ uru na azụmaahịa ahịa ya. Agbanyeghị, ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ kwuru na ụgbọ ala ịzụ ahịa nwere ọgụgụ isi kwesịrị ịnakọta ọtụtụ data, nke nwere ike ibute ngosipụta nzuzo na-enweghị isi, wee chọzie nchebe nchebe ozi.
Worldlọ Ahịa Ntanetị Ọhụrụ nke Ntanetị Smart
Na mgbakwunye na Wal-Mart, E-Mart, nnukwu usoro ego nke ndị South Korea na-ere ahịa New World Department Store, ewepụtakwara ụgbọ ahịa ịzụ ahịa mara mma, nke ga-amalite ọrụ ikpe na nso nso iji bulie asọmpi nke ụlọ ọrụ offline. nkesa ọwa.
Dabere na E-Mart, ụgbọ ibu azụmahịa a na-akpọ "eli", na abụọ n'ime ha ka a ga-etinye ha n'ụlọ ahịa ụdị ụlọ nkwakọba ihe na ndịda ọwụwa anyanwụ Seoul maka ngosi ụbọchị anọ. Site n'enyemaka nke usoro nnabata, ụgbọ ibu azụmahịa nwere ọgụgụ isi nwere ike soro ndị ahịa na-akpaghị aka ma nyere ha aka ịhọrọ ngwaahịa. N'otu oge ahụ, ndị ahịa nwekwara ike ịkwụ ụgwọ ozugbo site na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ekwentị, yana ụgbọ ahịa ịzụ ahịa nwere ike iji aka ya chọpụta ma akwụ ụgwọ ngwongwo niile.
Super Hi Smart Cartzụ ahịa
N'adịghị ka Wal-Mart na Worldlọ Ahịa Worldwa Ọhụrụ, Chao Hei bụ ụlọ ọrụ nyocha na mmepe iji mepụta ụgbọ ala ịzụ ahịa smart. Ekwuputara na Super Hi's smart shopping cart, nke lekwasịrị anya na ndozi ọrụ onwe onye, ​​na-eji teknụzụ dịka ọhụụ igwe, ihe mmetụta, na mmụta miri emi iji nyere aka dozie nsogbu nke ogologo ahịrị na nnukwu ụlọ ahịa.
Companylọ ọrụ ahụ kwuru na ugbu a, mgbe ọtụtụ afọ nke nyocha na mmepe na iteration, ụgbọ ahịa ịzụ ahịa ya nwere ike ịmata 100,000 + SKU ma mepụta nkwalite dị ukwuu. Ugbu a, e hiwere Super Hi Smart Shopping Cart n'ọtụtụ Wumart supermarkets na Beijing, ma nwee ọrụ ọdịda na Shaanxi, Henan, Sichuan na ebe ndị ọzọ yana Japan.
Shoppinglọ ịzụ ahịa Smart dị Akwa
N'ezie, ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ ndị a na-azụta ụgbọ ibu azụmahịa. N'ịbụ ndị mbuso agha ọgụgụ isi na azụmaahịa ọhụrụ na-agagharị, a na-atụ anya na ọtụtụ nnukwu ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ga-ewebata ngwaahịa ịzụ ahịa ahịa n'ọdịnihu, si otu a na-eme ka mmezu nke azụmaahịa, na-agbanye oke osimiri a na-acha anụnụ anụnụ, na -emepụta nnukwu ọhụụ ahịa.
Maka ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa, ngwa ngwa nke ịzụ ahịa ịzụ ahịa ga-abụ nnukwu uru. Nke mbu, ugbo ahia di nma nke onwe ya bu ezi echiche banyere oha nke nwere ike iwetara ndi kompeni ihe nkwado ahia; nke abụọ, ụgbọ ibu ịzụ ahịa nwere ọgụgụ isi nwere ike iwetara ndị ahịa ọhụụ ọhụụ ịzụ ahịa yana ịbawanye ikikere ndị ọrụ; ọzọ, smart ịzụ ahịa ụgbọ nwere ike inweta ọtụtụ igodo maka ụlọ ọrụ Data na-enye aka ijikọ akụ dị iche iche, belata ụgwọ ọrụ, yana ịbawanye uru azụmaahịa. N'ikpeazụ, a ga-ejikwa ụgbọ ahịa ịzụ ahịa smart dị ka ikpo okwu mgbasa ozi, nke nwere ike ọ bụghị naanị na ndị ahịa na-akparịta ụka nke ọma, kamakwa na-ewetakwu ego maka ụlọ ọrụ.
N'ihe niile, nyocha na mmepe nke ụgbọ ala ịzụ ahịa smart aghọwo nke tozuru oke, a na-atụkwa anya ngwa ahịa buru ibu. Ikekwe ọ gaghị ewe anyị ogologo oge iji zute ụgbọ ala ndị a mara mma na nnukwu ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ịzụ ahịa, mgbe ahụ anyị ga-enwe ike ịnweta ahụmịhe ịzụ ahịa smart.